Ny entin'i Australis antsika, ilay interface Firefox vaovao | Avy amin'ny Linux
Izay entin'i Australis antsika, ilay interface Firefox vaovao
Afaka fotoana fohy dia hisintona ny kinova 21 an'ny Mozilla Firefox, izay amin'ny maha-zava-baovao azy dia tsy azontsika atao ny manondro ny safidin'ny Aza manenjikaary ny Tatitry ny fahasalamana ao amin'ny Firefox.
Amin'ny tranga Aza manenjika, ao amin'ny safidin'ny browser dia mahita safidy 3 isika:
Lazao amin'ireo tranokala fa tsy te hanaraka ahy aho
Lazao amin'ireo tranonkala fa tiako harahina
Aza milaza amin'ireo tranonkala momba ny safidiko ny fanarahana ahy
Ho an'ny Tatitry ny fahasalamana ao amin'ny Firefox ny azontsika atao dia ny manangona sy mandefa data an-tsitrapo amin'ireo mpamorona Firefox hanatsara ny fitetezana.
Firefox 21 mbola tsy ampidirina Australis, ilay interface vaovao izay hitondra antsika ny kinova manaraka amin'ity browser ity, fa raha te hanandrana ianao dia mila mampidina ilay kinova fotsiny ianao (amin'ny teny Anglisy) alina avy amin'ity rohy manaraka ity:
Sintomy ny Firefox UX
Amin'ny ankapobeny, izay ho hitantsika rehefa apetrakao ity kinova ity dia ity:
Ok, inona no vaovao raha vao jerena? Ny zavatra voalohany dia ny endrika boribory an'ireo kiheba, izay tsy maintsy lazaiko, tsy tiako izany, ary tsy mifangaro tsara amin'ilay lohahevitra izy ireo.
Mazava ho azy, tiako ny endrik'ireo takelaka ao ambadika ireo. Manaraka izany ny menio mitambatra misy bokotra ho an'ireo lahasa lehibe indrindra azo tanterahina amin'ny tranokala:
Ankehitriny, zavatra mahasosotra ahy sy be dia be taiza no nisy ny menio tamin'ny fiainana rehetra Firefox? Ny fomba tokana nahitako ny fidirana amin'ny sisa amin'ireo safidin'ny browser dia ny fanesorana ny bara fisehony, satria izany no izy, na manampy safidy fanampiny ao amin'ilay faritra akaikin'ny motera fikarohana.
Tsy hoe olana lehibe izany, satria tsy dia miditra amin'ny zavatra tsy ao anaty menio mitambatra vaovao aho, fa ho an'ny mpampiasa hafa dia mety hahasosotra izany.
Ary ho ahy ny +100 dia alaina amin'ny fomba vaovao hanamboarana ireo singa ao Firefox:
Ankoatr'izany, mandeha ara-dalàna ny zava-drehetra, miaraka amin'ny fitoniana antenaina na dia misy aza ny antony tsy hita ilay kisary mpitantana fampidinana, tsy fantatro raha ho olana amin'ny cache ny sary famantarana KDE na bug ao amin'ity kinova ity. Mila mijery foana aho.
Manavao aho: Nesoriko ny cache an'ny icon KDE ary nipoitra indray ilay kisary fampidinana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Izay entin'i Australis antsika, ilay interface Firefox vaovao
Tsy haiko fa efa zatra firefox miaraka amin'ny lohahevitra mahazatra, izay mifanaraka tsara kokoa amin'ny hevitro, :(, ny australis dia toa chrome fotsiny, ka tsy tiako fotsiny ...
abib91 dia hoy izy:
marina ny anao…. io interface chrome io, tsy mandeha io…. tsy toy izany mihintsy
Valiny amin'ny abib91
San dia hoy izy:
raha satria samy mampiasa kiheba izy ireo dia aleo mandinika ny console. Inona avy ireo zavatra australis toa ny interface chrome?.
Valiny tamin'i Saint
Marina fa tsy toa inona na inona izany! (maneso)
Marina ny anao, izy ireo dia mitovy amin'ny loko ambadika sy ireo kisary izay novainao ho gnome, mitovy ihany koa izy ireo amin'ny:
* Firefox dia manome lanja ny bara fitetezana, ny chrome tsy.
* Ny firefox dia manafina ny chrome arrow "mandroso" fa tsy.
* Firefox miaraka amin'ny bokotra tsindry eo afovoan'ny bara fisolo vava dia manokatra chrome chrome vaovao No.
* Firefox dia mamela ny hanana lisitra misy tsoratadidy ao amin'ny bara fitetezana chrome fa tsy.
* Firefox dia mitantana ny tantaran'ny fampidinana ao anaty chrome window chrome no.
* Ny bokotra vaovao hanehoana ny lisitry ny tsoratadidy dia ahafahanao manampy ny pejy amin'ny tsoratadidy (izay toa hafahafa amiko satria raha manana ny farany ianao dia mila manana azy io satria na amin'ny alina mandritra ny androm-piainany aza).
* Izy ireo koa dia mitovy amin'ny fomba fitantanany ny safidin'ny mpitety tranonkala, na dia hampiditra azy ireo ao anaty takelaka fitetezana toy ny chrome aza ny firefox amin'ny ho avy, ny safidy sy ny fomba fizarana azy dia samy hafa tanteraka.
* Zaza kambana misaraka izy ireo rehefa teraka rehefa maneho ny fahazoan-dàlan'ny pejy.
* ary amin'ny lafiny hafa dia mitovy izy ireo fa satria ny kafe no nanaovana azy dia aleoko misotro azy alohan'ny hatsiaka.
Ahoana raha ekeko ny dika mitovy amin'ny fitaovana fanapahana / apetaho zoom. Ny tsipika 3 izay maneho ny menio dia efa nampiasaina tamina programa maromaro, noho izany, tsy heveriko ho kopia izy ireo.
Saika hadinoko fa izao ny chrome men dia miaraka amina sary masina fa tsy amin'ny soratra.
Tsy haiko raha tsapanao fa miresaka ny bika aman'endrika isika, fa tsy ireo zavatra ara-teknika 4 izay tsy hitovizany, dia eo amin'ny lafiny iray ihany ny menio ankehitriny (na dia mahatsiravina aza ny firefox miaraka amin'ireo sary masina), ny bara fitaovana dia saika identifca, ny plugins dia miharihary etsy ambony amin'ny fomba mitovy ary dia izay.
Ny zavatra hafa rehetra dia zavatra ara-teknika fa tsy endrika ivelany.
Mazava ho azy fa ny singa sasany dia hitovy amin'ny toerana iray na saika mitovy, resaka standardisation izany. Raha tarihin'izany isika dia nopeazina ny mpizaha tany rehetra (afa-tsy hoe mametraka ireo takelaka ao amin'ny bara fitetezana izy).
Amin'ny alàlan'ny fitantanana dia midika koa ny fomba anehoana ireo safidy, izay ao anatin'ny interface. Tsindrio ny kisary encryption an'ny firefox sy chrome / chromium, ampio add-on na mivezivezy amin'ny alàlan'ny safidy, ho hitanao fa afa-tsy ny fametrahana singa sasantsasany ao amin'ny fikandrana fitetezana lehibe, avy eo dia samy hafa tanteraka ny interface, ary koa ny Australis manome lanja ny kiheba ampiasanao amin'izany fotoana izany, tsy misy mpitety.
Araka ny efa nolazain'izy ireo, azo atao ny manova ny menio eo anelanelan'ny fijery kisary sy ny fomba fijery mahazatra.
Toa ny tabilao ampiasaina ao amin'ny Windows 8 Modern UI ihany izy io, saingy ny aingam-panahiny dia ny takelaka Google Chrome (miankina amin'ny interface inona no ampiasainao, Firefox / Iceweasel sy Google Chrome / Chromium no tsy mitovy amin'ny fanjifana loharano).
Ilay lazaiko ihany. Tsy tonga amiko ny mahatsapa ny tsy fisian'ny interface toa ny Opera izay tiako ary mampifanaraka ny lohahevitra GNOME2.
[YaoMing] Amin'ny Alarobia, na izany aza, hampiasa XFCE aho rehefa vita ny fampidinana ny Debian Wheezy DVD1 ary farany hamoaka ny Iceweasel 21 eo amin'ilay birao izay efa nahazo tsiro tena manokana aho. [/ YaoMing]
Toa an'i Chrome / Chromium miaraka amin'ny Qt kely izy
Annubis dia hoy izy:
Tsy tiako xD
Valiny tamin'i Annubis
Mampiasa fanahafana na fanitarana ve ianao mba hampidirana ny Firefox amin'ny KDE? satria mahatalanjona ny endriny, toa fampiharana iray voasoratra ao amin'ny Qt aza izy.
Mampiasa ny lohahevitra oksizenina ho an'ny firefox ianao ...
Tamin'ny voalohany dia nieritreritra an'izany aho, saingy tadidiko fa ity lohahevitra ity dia manova ny sisin-tany (manamarika ny fiandohan'ny varavarankely misy tsipika) ary manova ny kisary amin'ireo an'ny KDE (Oxygen), na dia tsy azoko antoka aza raha azo alamina izany.
Tsia, tsia. Oxygen fotsiny ilay izy, ny nametrahako ny safidin'ny GTK izay ampiasain'i QtCurve.
Ao amin'ny motera oxygen-gtk? 😮
Ao amin'ny KDE azoko atao ve ny mametraka ny bokotra mampihena, mampitombo ary manidy ny ankavanana toy izay azo atao ao amin'ny GNOME? Satria rehefa nampiasa KDE tamin'ny Squeeze aho dia teo anilany ireo, miampy ilay kinovan'ny Oxygen izay ananako dia tsara.
Fabio.Felio dia hoy izy:
Tsy tiako ity. Tsy tiako ny plasma, ary tsy tiako ny oksizenina. Aleoko qt-curve. Misy aza ny curve gtk2. Fandaharana mampiasa pyqt aho fa soa ihany ao amin'ny Windows fa tsy mivoaka ho azy ny oksizenina maharikoriko. Raha tsy izany dia mifangaro tsara amin'ny fisehoan'ny Windows araka ny tokony ho izy izy ireo.
Valiny tamin'i Fabio.Felio
Fitsapana fotsiny… 🙂
Tokony hatsaran'izy ireo tsara kokoa ny fitetezana haingana.
Misy ny extension antsoina hoe "Super Start" izay mahatahotra.
Raha ny amiko dia nampiasaiko aho saingy somary niadana ny navigateur ary nandany loharano bebe kokoa noho ny mahazatra. Raha ny momba ilay interface vaovao dia efa nanandrana azy io aho taloha ary tsy tiako mihitsy io karazana FireChrome io
Hoporofoiko ity hahitako hoe ahoana, misaotra tamin'ny tolo-kevitra.
raha mendrika ny fanitarana,
mahaliana misokatra hanandrana.
Etsy ankilany, misy olon-kafa sendra azy fa ny firefox 20 dia mikatona amin'ny fidirana amin'ny pejin'ny caralibro = facebook?
Lohahevitry ny lohahevitra (tanteraka): Jereo ity horonantsary Unity 8 mandeha amin'ny Mir ity https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=E9AzRxsnfTE#!
Tsy misy isalasalana fa manana "zavatra" mampatsiahy ny Mac OS X (fa tsy noho ny fitaovana finday ampandehanan'ny XD), saingy tsy azoko lavina fa tena tsara be ilay izy. Inona ny hevitrao?
toa mac osx izy, miaraka amin'ireo varavarankely azo zaraina amin'ny windows 8 xd
Ny tsara indrindra amin'ny horonantsary: ​​Ny sary famantarana KDE amin'ny akanjon'ilay mirakitra feo, hita taratra amin'ny monitor 🙂
Ary voarakitra miaraka amin'ny N950 XD
Ny hany ataon'izy ireo dia ny fampiasana fampiharana QML somary tsotra (ilay interface Unity Touch)
Ny tena marina dia eny, mbola tsy nahita azy nanokatra fangatahana gtk aho, tsy misy xD, ary toa windows 8 xddd izany
Tsy tiako izany ... Ary efa an-taona maro no nampiasa Firefox, miaraka amin'ny Skin of Noia 2.6, ilay ampiasako ao amin'ny Thunderbird ... amin'ny volondavenona sy manga, efa nanandrana ny hafa aho fa miverina amin'ny Firefox. Ny fanavaozam-baovao koa dia mandondona kojakoja sasany na kojakoja imbetsaka ... noho izany dia nanjary phobic amin'izy ireo aho. Iza no mety ho mpankafy fanovana mpizaha na rafitra miasa isan-taona…. ???
Raha ny marina dia toa sangisangy ho ahy ilay menio vaovao. Ankoatry ny maha-ratsy tarehy an'ireo sary masina goavambe ireo dia tsy manome fidirana haingana amin'ireo safidy tsy hita (mbola tsy manana ny fanampin-tsafidy "Tools" ao amin'ny menio), ary tsy misy na "About "bokotra. Ary tsy bokotra hanehoana ny baran'ny menio (eny, azonao atao ny manindry tsara ary mifidy azy, saingy tsy mitovy izy io), izay tsy tokony ho ilaina intsony satria avy amin'ny bokotra vaovao dia tokony hiditra amin'ny zava-drehetra ianao ...
Kerameki dia hoy izy:
Heveriko fa mitovy ihany, tsy mahaliana ahy mihitsy ny endrika (mankahala takelaka misy sisiny miolikolika aho) ary toa tompon'andraikitra amin'ny fanaovana an'io asa io hatrany izy ireo amin'ny fidirana amin'ny safidin'ny browser ...
Mamaly an'i Kerameki
Betsaka ny nitsikera ny famolavolana Firefox ankehitriny satria nitovy tamin'ny an'ny Opera izany, saingy raha jerena tsara dia toa tsy azoko kokoa ny miasa ao amin'ilay menio izay ananan'i Firefox / Iceweasel, ary ao amin'ny GNOME2 / MATE izany mihazakazaka toy ny maivana noho ny Google Chrome (na dia gaga aza aho amin'ny faharetany rehefa mandeha amin'ny Windows XP PC toa ahy, izay manana fitaovana tsy dia ilaina loatra sy lany andro, ao anatin'izany ny fampitaovana VIA rehetra ananako dia tafiditra ao).
Aleoko ny menio mahazatra
Hiezaka aho hahita hoe ahoana, misaotra tamin'ny tolo-kevitra
Ny Firefox dia tsy mpizahatany isan'andro nandritra ny fotoana ela ary izany no mahatonga ahy manana ny tena fotony satria tsy ampiasako amin'ny fampandrosoana fotsiny, fa ny hafatrao dia nahaliana ahy ary hitako tao amin'ny addons.mozilla.org ity lohahevitra ity izay tena tsara, Firefox dia nanova ny endriny amin'ny vanim-potoana amin'ny fomba kanto:
Oay! Io famolavolana io dia tsara lavitra noho ilay tian'i Mozilla apetraka.
Na izany na tsy izany, mivavaka aho mba ho maivana kokoa noho ny famolavolana ankehitriny.
Misy zavatra mbola tsy nazava tamiko: ny interface fotsiny ve no ho default sy ho avy amin'ny kinova ho avy? Ny tiako holazaina dia misy bokotra na zavatra hanovana ny interface? Raha tsy izany, ratsy loatra.
Ami eny tiako ilay izy! 😀
blaxus dia hoy izy:
Tiako ilay interface, saingy heveriko fa tsy nahomby izy ireo tamin'ny famolavolana ireo sary masina, somary daty no fijerin'izy ireo.
Mamaly an'i blaxus
vidin'ny dia hoy izy:
Tsy tiako izany toa chromium sy / na ny zanany lahy, tiako ny firefox satria ny zavatra naseho hatrizay dia tsy hitovy io, na eo aza izany dia tavela miaraka amin'ny iceweasel aho, tsy ho ela eto dia hanavao izany ao amin'ny trano fitahirizako izay tiako namboarina hahita ilay firefox 🙂
Valiny amin'ny costeelation
Mitovy amin'ny Iceweasel isika. Aleoko ilay weasel mangatsiaka toy izay panda mena may (vao manafosafo).
Na izany na tsy izany, ny hatsikana dia ity lohahevitra ity ho solon'ny iray izay efa nampiasaina hatramin'ny nivoahan'ny Firefox / Iceweasel 4.
Rahoviana no hampiasaina "zanatany" io interface vaovao io?
grabiel dia hoy izy:
Ao amin'ny windows 8 ny firefox dia manomboka ahy taloha fa amin'ny famoahana ny tranonkala dia mandeha haingana kokoa ny chrome
Mamaly an'i grabiel
Gurren_Lagan dia hoy izy:
Halako io interface io isaky ny toa chrome io
Mamaly an'i Gurren_Lagan
Bittorrent Sync: safidy maimaim-poana amin'ny "rahona"
Heveriko fa: Debian 7 dia nanampy an'i Gnome Shell